Waxbarasho dadka waaweyn - Utbildningsguiden
› Waxbarasho dadka waaweyn
Qofka ku cusub Iswiidhen
Waxbarashada dadka waaweyn ee degmada – komvux
Imtixaamid– sidan ayey u shaqeysaa
Qiimeyn– helida qiimeynta aqoontaadi hore
Sfi, afka iswiidhishka ajnabiga
Sfi laga dhigto dugsiga waxbarashada dadka waaweyn ee la seexdo (folkhögskola)
Waxbarashada gaarka ee dadka waaweyn – särvux
Dugsiyada la seexdo ee waxbarashada dadk waaweyn (Folkhögskola)
Shuruud buuxin kadib sanadka asaasiga
Waxbarashada xirfadaha jaamacadda
Dadka da’doodu ka weyn tahay 16 sano
Si uu qofku shaqo u helo waxaa badanaa lagu xiraa inuu heysto shahaaddo dugsi hoose/dhexe iyo mid sare. Qofka aan kuu guuleysana inuu shahaaddo ka qaato dugsiyada hoose/dhexe iyo kuwa sare wuxuu aqoontaa qaadan karaa isagoo qof weyn ah. Sidoo kale waa in qofku ku guuleystaa dugsiga sare si uu u qaato waxbarasho xirfad jaamacadeed ama waxbarasho kale ee jaamacadah.
Haga yaasha waxbarasho iyo kuwo xirfadeed ee iskuulada iyo degmooyinka ayaa warbixin intaa dheer oo ku saabsan waxbarashada kala duwan iyo suuqa shaqada iswiidhishka ku siin kara.
Waxa jira waxbarasho kala nooca oo uu qofka qaan gaara dooran karo, waxbarasho kugu hogaamin karta xirfad iyo waxbarasho aad ugu diyaar garoobeyso sidii aad wax uga baran laheyd xirfad shaqo ama jaamacadaha kale. Si aad u ogaato heerka ay taagan tahay waxbarashada aad horey u heysatay waxaa qiimeynta aqoontaada iyo waaya aragnimada aad wadato kaa caawin kara hagaha waxbarasho iyo xirfadeed ee degmadaada ama iskuulkaada.
Haddii aad dooneyso inaad ka shaqeyso ama wax ku barato Iswiidhen waxad u baahan tahay barashada afka. Waxaad qaadan kartaa kooraska iswiidhishka ajaaniibta (SFI) adigoo ku bar bar wada maadooyin kale.
Haddii aad hore u laheyd waxbarasho waxad u baahan kartaa inaad dhameystirato taa si aad ama shaqo u hesho ama aad waxbarasho kale u sii wadato.
Waxaa iskuulada iyo degmooyinka laga heleyaa hage waxbarasho iyo mid xirfadeed oo warbixin intaa ka badan ku siin kara, haddii ay noqon laheyd waxbarashada ama suuqa shaqada Iswiidhen.
Waxbarashada dadka waaweyn ee degmada (komvux) waxa loogu tala galay dadka waaweyn ee aan laheyn waxbarashada dugsiyada hoose/dhexe iyo sare. Komvux ayaad ku dhameystiran kartaa waxbarashadaadi hore ama waxad dooran kartaa inaad bilowdo jiho waxbarasho cusub. Waxaad kalood komvux ka dhigan kartaa afka iswiidhishka, waxbixin intaa dheer ka aqriso qeybta afka iswiidhishka ajnabiga (SFI) ee qoraalkan hoos ku qoran.
Markaad waxbarasho ka bilowdo komvux waxaad xaq u yeelaneysaa qorshe waxbarasho shakhsi. Dhamaan waxbarashada kala duwan ee degmadu masuulka ka tahay waxa lagu dhigtaa lacag laaan.
Waxaad komvux ka heli kartaa:
dhigashada sfi iyo koorsooyin u qalma kuwa dugsiyada hoose/dhexe iyo sare,
diyaarinta shahaaddo u qalanta dugsiga sare,
dhameystirka waxbarasho hore si aad u dhigan karto jaamacad ama jaamacad xirfadeed,
helidda waxbarasho xirfadeed,
baarintaanka aqoontaada ku saabsan maado,
helida sidii laguu qiimeyn lahaa aqoontaada hore.
Yaa wax ka dhigan kara komvux?
Laga bilaabo 1 juulaay sanadaka qofku buuxiyo 20 sano wuxuu bilaabi karaa inuu wax ka dhigto komvux. Qofka wax ka barayaan komvux waa inuu deggen yahay Iswiidhen, aanu laheyn aqoonta waxbarashdu siineyso iyo inuu karo inuu ku baaso waxbarashadaa. Waxa dhici karta mararka qaar inuu komvux-ka dhigto qof dadiisu ka yar tahay 20 sano.
Waxa jiri karta fursad waxbarasho oo saacado buuxa ah ama mid qeyb ah. Waxad wax ku dhigan kartaa iskuulka, ka qeyb qaadasho waxbarasho adigoon joogin iskuulka ama adigoo labada isku dara. Waxaa kaloo jiri karta fursad ah inaad koorsooyinka qaar ama qeybo ka mida ku qaadato goob shaqo.
Waxa la isku dhex wadi karaa waxbarasho heerkeedu kala duwan yahay. Tusaalle ahaan waxa la wada dhigan karaa barashada luqadda iswiidhishka ee ajaanibta (sfi) iyo waxbarasho kale ee laga qaato waxbarashada dadka waaweyn (komvux).
Warbixin intaa dheer ee ku saabsan koorsooyinka ka jira komvux-ka degmadaada ka la xiriir hagaha waxbarasho iyo xirfadeed ee dugsiga waxbarashada dadka waaweyn aad dooneyso inaad dhigato ama degmada aad ku nooshahay.
Mudada waxbarashadu socoto waxaad si joogto ah u heli doontaa warbixinta waxa aad baratay marka loo eego hadafka casharada. Waxaa muhima inaad fahamto inaad wax baraneyso iyo baahida aad u qabto horumarka.
Waxaa waxbarashada dadka waaweyn laga isticmaalaa shahaaddo leh darajada A-F, sida tusaalle ahaan tan laga isticmaalo dugsiyada hoose/dhexe iyo sare. A ayaa ah darajada ugu sareysa iyadoo E ay tahay tan ugu hooseysa ee baasidda. Shahaaddada F ayaa la helaa marka qofku guul dareysto. Macalinkaaga ayaa bixiya shahaaddada kadib markuu kooras kasta dhamaado.
Imtixaanka ayaa loola jeedaa in la qiimeeyo aqoontaada iyadoo loo eegayo shuruudaha aqoonta si aad u hesho shahaaddada maadada ama kooraska aad qaadatay. Waxaad xaq u leedahay inaad imtixaan ku gasho dhamaan maadooyinka iyo koorsooyinka shahaaddada lagu bixiyo. Imtixaanka waxa sameyn kara oo keliya degmada masuulka ka ah kooraska aad qaadaneyso. Si aad u sameyso imtixaanka waa inaad ku nooshahay Iswiidhen.
Ujeedada imtixaanka ayaa ah in la ogaado aqoonta ardayga ee qeybaha kala duwan ee shuruudaha aqoonta maaddada ama kooraska. Sida loo fuliyo taa waxa goaan ka gaaro iskuulka. Sidoo kale iskuulka ayaa goaan ka gaara sida iyo goorta la sameynayo imtixaanka. Ardaygu isagu ma dooran karo inuu imtixaanka sameeyo waqti ugaar ah.
Waxaa imtixaan loo gali karaa aqoonta dugsiyada hoose/dhexe, sare iyo dugsiyada waxbarashada dadka waaweyn. Waa imtixaanka lagu heli karaa dhamaan darajooyinka kala duwan ee shahaaddada. Haddii aad horey u heysatay shahaaddo baasid ah ee kooras, balse aad dooneyso inaad imtixaan sameyso si aad sare ugu qaado shahaaddada, markaa wuxuu iskuulku xaq u leeyahay inuu kharsh kaa qaado. Kharashka ayaa ugu badnaan ah 500 oo karoon.
Qiimeynta waxa loola jeeda baaritaanka iyo qiimeynta aqoontu qofku leeyahay. Waxa jirta fursad qofka loogu qiimeyn karo aqoontiisii iyo waaya aragnimadiisii hore. Ujeedada qiimeyntu waxey noqon kartaa inaad:
inaad bilowdo waxbarasho iyadoona bilowga la is waafijinayo heerka aqoonta si aad uga maaranto inaad ku celiso wax aad horey u taqaaney.
in la dhimo waqtiga ay waxbarashadu kugu qaadan karto, ama
la diiwaan geliyo aqoontaada si aad ugu qaadan karto taa tusaalle ahaan wareysi shaqo.
Haddii aad dooneyso qiimeynta aqoontaada, la xiriir degmadaada.
Waxbarashada iswiidhishka ajnabiga (sfi) waxa loogu tala galay qofka u baahan aqoon asaasi ah ee afka iswiidhishka. Ujeedadu waa barashada afka iswiidhishka si qofku af iyo qoraal ahaanba isugu dabari karo luqadda, ugu isticmaali karo nolosha bulshada, tan shaqada isla markaan wax ugu baran karo haddii uu taa doorto. Qofka aan wax ku qori karin kuna aqrin karin afkiisa hooyo wuxuu heleyaa fursad uu taa ku barto.
Yaa heli kara barashada Sfi?
Qofka dhiganaya sfi waa inuu jiraa ugu yaraan 16 sano. Ma jirto xad daada sare ee qofku ku bilaabi karo dhigashada sfi. Waa inuu qofku deggen yahay Iswiidhen isla markaanu aanu heysan aqoonta asaasiga ee afka iswiidhishka ee lagu helayo waxbarashada.
Waxbarashada ayaa loo qorsheeyaa, qaabeeyaa isla markaana loo waafijiyaa asaaskaada, baahidaada iyo hadafkaada. Maadaama sfi loogu tala galay dad leh waaya aragnimo kala duwan, ka yimid xaalado kala duwan ee nololeed, leh aqoon iyo hadaf waxbarasho kala duwan waxuu koorasku dadkaa kala duwan ku qaataa mudo kala duwan. Kooraska ayaa haddaba la bilaabaa lana dhameeyaa xilliyo kala duwan taasoo ku xiran qofka.
Ardayga ayaa todobaadkii qaata cashar ugu yaraan 15 sacadood. Casharada ayaa laggu dhigaa afka iswiidhishka iyadoo barashada akhriska iyo qoridda lagu qaato afkaaga hooyo ama af kale uu qofku aad u yaqaano. Waxaa sfi lagu dhinac wadi karaa shaqo, baraaktiik, qiimeyn, waxbarasho kale ee laga qaato komvux ama waxbarasho gaar u ah dadka waaweyn (särvux).
Arday kasta wuxuu heleyaa qorshe waxbarasho shakhsiyeed. Iskuulka ayaa ardayga la diyaariya qorshaha waxbarasho ee gaarka ah. Waxa qorshahaa ku cad hadafka waxbarashada iyo inta ay waxbarashadu soconeyso.
Qorshaha waxbarasho ee shakhsiyeed ayaa la baddali karaa haddii aad dooneyso inaad dhigato dhowr kooras ama aad beddesho hadafkaada waxbarasho mudada waxbarashadu socoto.
Waddooyin waxbarasho iyo koorsooyin
Sfi wuxuu leeyahay sadax waddo oo waxlagubarto: 1, 2 iyo 3. Waddada waxbarasho 1 waxa loogu tala galay qofka aan waxna ku aqrin kuna qorin afkiisa hooyo ama leh waxbarasho gaaban halka waddada waxbarasho 3 loogu tala galay qofka horey wax u soo bartay. Wadda kasta waxey ka kooban tahay dhowr kooras.
Sfi ayaa ka kooban afar kooras (A, B, C iyo D) iyo sadax waddo waxbarasho (1, 2 iyo 3). Dhammaan waddooyinka waxbarasho wey is wataan waana kuwo loogu tala galay cidda dhiganeysa.
Waddada waxbarasho 1 waxa loogu tala galay ardayda waxbarashadoodii hore yar tahay amaba aan iskuul soo dhigan. Waddada waxbarasho 1 waxa lagu qaataa koorsooyinka A, B, C iyo D.
Waddada waxbarasho 2 waxa loogu tala galay ardayda soo dhigatay in ka yar inta lagu dhigto dugsiga sare Iswiidhen. Waddada 2 wuxuu ardaygu qaataa koorsooyinka B, C iyo D.
Waddada waxbarasho 3 waxa loogu tala galay ardayda iskuulka ay soo dhigteen u qalmo dugsiga sare Iswiidhen ama ka soo qeyb qaatay waxbarasho jaamcadeed. Waddada waxbarasho 3 waxa lagu dhigtaa koorsooyinka C iyo D.
Mudada waxbarashadu socoto waxaad si joogto ah u heli doontaa warbixinta waxa aad baratay marka loo eego hadafka casharada.
Waxaa muhima inaad fahamto inaad wax baraneyso iyo baahida aad aad u qabto horumarka.
Waxaa Sfi laga isticmaalaa shahaaddo leh darajada A-F, sida tusaalle ahaan tan laga isticmaalo dugsiyada hoose/dhexe, kan sare kan komvux. A ayaa ah darajada ugu sareysa. Shahaaddada F ayaa la helaa marka qofku guul dareysto. Shahaaddo ayaa la bixiyaa marka kooras kastaa la dhameeyo. Barashada qoridda iyo aqrinta shahaaddo laguma bixiyo. Waxaad kalood heleysaa caddeyn ay ku diiwaan gashan tahay aqoontaada.
Ma dooneysaa inaad wax intaa dheer ogaato?
La xiriir dugsiga waxbarashada dadka waaweyn/sfi ee degmadaada. Waxaa halkaa ku sugan xage waxbarasho iyo xirfadeed oo kugu caawinayo talo iyo warbixin intaa dheer. Warbixinta halka aad kala xiriiri karta waxaad ka heleysaa bogga internetka ee degmada.
Waxa jirta fursad sfi looga baran karo dugsiyada folkhögskola-da. Haddii aad dooneyso inaad sfi ka dhigato folkhögskola, la xiriir degmadaada si aad u ogaato fursadaha jira.
Ma dooneysaa inaad ogaato wax intaa dhaafsan?
La xiriir hagidda waxbarasho iyo xirfadeed ee folkhögskola-ha si aad u ogaato waxa quseeya waxbarashada aad xiiseyneyso.
Dugsiyada särvux waxa laga dhigan karaan koorsooyinka maadooyin kala duwan iyo iyadoo halkaa lagu qiimeeyo aqoonta qofka horey u watay. Waxaad heleysaa qorshe waxbarasho shakhsi kaasoo soo koobaya hadafka aad ka leedahay waxbarashada iyo koorsooyinka la qaato.
Waxbarashada gaarka ee dadka waaweyn waxaad ku:
qaadan kartaa heerka heerka dugsiga hoose/dhexe iyo kan sare,
dooran kartaa koorsooyin kala duwan,
ku dhigan kartaa sfi barbar socda,
ku qaadan kartaa waxbarasho xirfadeed.
dhigan kartaa si aad u diyaariso shahaaddo u qalanta dugsiga sare ee gaarka,
ku heli kartaa qiimeyn aqoontaadii hore
Yaa wax ka dhigan kara särvux?
Waxbarashada gaarka ee dadka waaweyn waxa loogu tala galay qofka fqaba carqalad horumar/ naafo caqli ama uu la soo gudboonaadan dhaawac maskaxeed isla markaana aan heysan waxbarashada gaarka dugsiga hoose/dhexe ama sare ama tan dugsiga hoose/dhexe iyo kan sare. Särvux waxaa kaloo loogu tala galay dadka waaweyn ee doonaya iney dhameystiraan waxbarasho hore, ama doonaya iney beddelaan xirfad ama doonaya iney bartaan afka iswiidhishka.
Laga bilaabo 1 juulaay sanadaka qofku buuxiyo 20 sano wuxuu bilaabi karaa inuu wax ka dhigto särvux. Qofka wax ka barayaan särvux waa inuu deggen yahay Iswiidhen, aanu laheyn aqoonta waxbarashadu siineyso iyo inuu karo inuu ku baaso waxbarashadaa. Waxa dhici karta mararka qaar inuu särvux-ka dhigto qof dadiisu ka yar tahay 20 sano.
Waxa jiri karta fursad waxbarasho oo saacado buuxa ah ama mid qeyb ah. Waxaa kaloo jiri karta fursad ah inaad koorsooyinka qaar ama qeybo ka mida koorsooyinka ku qaadato goob shaqo.
Waxa la isku dhex wadi karaa waxbarasho heerarkeedu kala duwan yihiin. Waxaa sfi lagu dhinac wadi karaa waxbarasho kale ee laga qaato (särvux).
La xiriir dugsiga waxbarashada dadka waaweyn aad dooneyso inaad ku biirto ama degmada aad deggen tahay si aad u hesho warbixin intaa dheer ee koorsooyinka laga helo särvux-ka ku yaal degmadaada.
Ardayga ku baasa koorsooyinku wuxuu heleyaa shahaaddo leh darajada A-E, A ayaa ah darajada ugu sareysa. Shahaaddada E ayaa darajada ugu hooseeysa.
La xiriir degmadaada. Warbixinta halka aad kala xiriiri kartana waxaad ka heleysaa bogga internetka ee degmada.
Folkhögskolan ayaa u furan qofka dadiisu ka weyn tahay 18 sano.
Koorsooyinka guud ayaa loogu tala galay qofka aan heysan waxbarashada dugsiga hoose/dhexe iyo kan sare isla markaana ay ku adag tahay inuu qaato waxbarasho intaa dhaafsn ama ka qeyb qaato suuqa shaqada. Waxyaabaha lagu qaato koorsooyinka iyo dhererkooda ayaa loo eegaa aqoonta hore ee ardayga iyo hamigiisa. Markuu ardaygu kooraska dhameysto wuxuu waxbarasho ka qaadan karaan jaamacad xirfadeed ama jaamac kale.
Dugsiyada Folkhögskolan ayaa sidoo kale leh waxbarasho kala duwan ee xirfadeed. Waxbarashada xirfadda suxufiga, hogaamiye dugsiga xilliga firaaqada iyo turjubaanka luqadaha dhagoolaha faraha looga hadlo ayaa ka mida xirfadahaa.
Koorsooyinka qofka ku cusub dalka
Koorsooyinka qaar ayaa loogu tala galay dadka waaweyn ee dhowaan yimid Iswiidhen. Kooraska asaasiga ee dadka dalka ku cusub ayaa laga dhigtaa dhowr ka mida folkhögskola-da dalka.
La xiriir hagidda waxbarasho iyo xirfadeed ee mid ka mida folkhögskolan si aad u ogaato waxa looga baahan yahay waxbarashada aad xiiseyneyso.
Qofka doonaya inuu dhigto jaamacad wuxuu u baahan yahay inuu buuxiyo shuruudaha lagu galo jaamacadaha. Waxbarashooyinka qaar ayaa wata shuruudo qaasa taasoo micnaheedu yahay inaad soo dhigatay koorsooyin qaasa ee waxbarashada qaar.
Qaab qofku ku buuxin karo shuruudaha jaamacadda ayaa noqon kara sanadka asaasiga. Tani waa waxbarasho sanad socota oo heer dugsi sare oo loogu tala galay qofka doonaya inuu buuxiyo shuruudaha qaaska ee waxbarashada jaamacadda qofku doonayo.
Shuruud buuxin kadib marka la soo dhigto komvux
Waxaad xaq u leedahay inaad waxbarasho shuruud buuxina ka qaadato dugsiga waxbarashada dadka waaweyn ee komvux, taasoo ah heer dugsi sare. Xaqaan ayaa loo isticmaali karaa shuruudaha asaasiga iyo kuwa qaarka ah intaba.
Si kale oo lagu buuxiyo shuruudaha
Xataa haddii aadan heysan waxbarasho buuxda ee dugsi sare waxaad haddana dalban kartaa jaamacad. Haddii aad leedahay waaya aragnimo ama awood xirfadeed hore ee shaqo ama waxbarasho taasoo loo qiimeyn karo iney ku filnaato oo aad ku dalban karto jaamacadda. Balse arrintaa awood xirfadeedka waa inaad caddeyn u heysataa. Waxad la iman kartaa awood xirfadeed koorsooyin hore aad soo dhigatay ama waaya aragnimo shaqo, mid ururada maxaliga ah ama inaad dalka dibadiisa ku nooleyd mudo dheer. Sida aad ku caddeyn karto awood xirfadeedkaa ayaa loogu yeeraa qiimeynta awood xirfadeedka. Warbixin intaa dheer ee meesha aad u diri karto codsigaada awood xirfadeedka dhabta ah si laguugu ogolaado waxbarashada jaamacadaha la xiriir bogga internetka ee la talinta jaamacadaha antagning.se
Hagidda waxbarashada iyo xirfadaha
Waxaa jaamacad kasta ay leedahay hagid waxbarasho iyo mid xirfadeed. Halkaa ayaa la xiriri kartaa haddii aad xiiseyneyso mid ka mida waxbarashada jaamacaddu bixiso si aad u hesho hagid guud ee heerka waxbarasho jaamacadeed. Bogga internetka ee la talinta jaamacadaha studera.nu ayaad ka heleysaa warbixin ku qoran afaf kala duwan ee ku saabsan waxbarashada jaamacadaha iyo hagidda waxbarasho iyo tan xirfadeed.
Waxbarashada jaamacadaha ayaa billowda guga iyo deyrta. Waxbarasho buuxda ayaa la qaataa qiyaastii 40 saacadood todobaadkii. Wuxuu qofku dooran karaa inuu wax barto waqti aan buuxin isagoo waxbaranaya boqolkii 50 ama 25 koorsooyin badan. Markaa wuxuu qofku wax baranayaa saacado kooban todobaadkii isagoona qaadanaya dhibco jaamacadeed ee ka yar qofka wax barta waqti buuxa. Waxbarasho badan iyo koorsooyin ayaa la qaataa adigoo aan jaamacadda joogto u tegeyn. Waxaa kaloo jira casharo fiidkii ama sabtiga iyo axadda la qaato. Tani waxey sahleysaa in qofku waxbarto isagoo shaqeyneya.
Jaamacadaha xirfadaha (YH) ayaa wax bara qofka doonaya inuu barto xirfad kadib markuu dhameysto dugsiga sare ama waxbarashada dadka waaweyn ee (komvux). Waxaa jira xirfado la kala dooran karo. Waxbarashadaa ayaa badanaa socota inta u dhaxeysa hal iyo sadax sano iyadoona ka kooban tiyoorii iyo baraaktiko laga fulinayo goob shaqo. Waxaa shardi ah in qofku aqoon ku filan u leeyahay afka iswiidhishka si uu uga qeyb qaato waxbarashadaa taasna waxaa goaan ka gaara jaamacadda. Jaamacadaha xirfadaha qaar ayaa bixiya gargaar afka iswiidhishka ah ee la xiriira xirfadda.
Waxaad codsan kartaa waxbarashada jaamacadda xirfadaha haddii aad
heysato shahaaddo dugsi sare iswiidhish ama komvux,
heysato waxbarasho dal kale ee u qalanta shahaaddada dugsiga sare,
aad buuxin karto shuruudaha asaasiga waxbarashada marka la eego waxbarashadaada iswiidhishka ama aad dal kale kala timid,
heysato waaya aragnimo baraaktiko ah ama wax kale.
Qofka aan buuxin shuruudaha guud
Haddii aadan buuxin shuruudaha guud ee lagu dhigto jaamacadaha waxaa haddana dhici karta inaad hesho fursad ay jaamacaddu kugu qaadato. Jaamacadaha ayaa mararka qaar taa sameeya haddii loo arko in ardaygu ka bixi karo waxbarashada kuna shaqeynayo xirfadda waxbarashadu ku saabsan tahay. La xiriir jaamacadda oo weydii waxa loo baahan yahay.
Sidan ayaa loo codsan karaa
Jaamacad kasta iyadaa maamusha qaadashada ardayda waxbarashada. Sidaas darteed toos ula xiriir jaamacadda, si aad u ogaato qawaaniinta jirta.
Waxad halkan ka heleysaa waxbarashada jaamacadaha xirfadaha: yrkeshogskolan.se